Ukuqonda iimfuno zabaThengi bakho ngoVavanyo lwePredictive | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 14, 2017 Douglas Karr
Kwiintengiso ezininzi kunye neengcali zentengiso, ngumzabalazo oqhubekayo wokufumana naluphi na ulwazi olunokubakho olusuka kwidatha esele ikho. Umthamo otyumkileyo wedatha engenayo unokoyikisa kwaye woyike ngokupheleleyo, kwaye uzame ukukhupha i-ounce yokugqibela yexabiso, okanye ulwazi nje oluphambili, kuloo datha inokuba ngumsebenzi otyhafisayo.
Kwixesha elidlulileyo, iinketho zazimbalwa:
Qesha izazinzulu zedatha. Indlela yokufumana abahlalutyi beenkcukacha zobuchwephesha ukuhlalutya idatha kwaye babuye neempendulo kunokuba kubiza kwaye kudle ixesha, ukuhlafuna iiveki okanye iinyanga, kwaye ngamanye amaxesha kusabuya iziphumo ezingathandekiyo.
Themba ithumbu lakho. Imbali ibonakalisile ukusebenza kwezi ziphumo kunokuba yinto ethandabuzekayo.
Yima ke ubone ukuba kwenzeka ntoni. Le ndlela yokwenza izinto inokushiya umbutho kwi-miasma yokhuphiswano nabo bonke abanye abantu abathathe indlela efanayo.
Uhlalutyo lweengqikelelo baqhekeze ukuqonda okuhlangeneyo kokuthengisa kwamashishini kunye noochwephesha bezentengiso, kubenza ukuba bakwazi ukuphuhlisa kunye nokuhlengahlengisa iimodeli zokufumana amanqaku okwandisa ukusebenza kwephulo.
Ukuxela kwangaphambili kubahlalutyi Itekhnoloji iyiguqule indlela amashishini aqonda ngayo, avavanye kwaye ahlanganyele abaxumi babo bangoku kunye nabaza kuba besebenzisa i-AI kunye nokufunda ngomatshini, kwaye kwenzeka into ebonakalayo kwindlela abathengisi kunye nabathengisi abahlalutya ngayo kunye nokukhupha ixabiso kwidatha yabo. Oku kukhokelele ekuchazeni ngakumbi kubahlalutyi inkqubela phambili kuyilo kunye nokusasazwa kwezixhobo ezisebenza ngokukuko ngakumbi nangakumbi ngokunzulu zedatha malunga nabathengi beshishini kunye neemfuno zabo.
Ukuxela kwangaphambili kubahlalutyi iyaqhubeka nokwakha ekusebenziseni umatshini wokufunda kunye ne-AI, ukudibanisa ngokukhawuleza iimodeli ezinokubakho kwangaphambili. Ezi modeli zenza amanqaku akhokelayo, isizukulwana esitsha esikhokelayo kunye nedatha ekhokelwayo ephuculweyo ngokusebenzisa umthengi okhoyo kunye nedatha yokulindela kunye nokuqikelela ukuba ezo zikhokelo okanye abathengi bazakuzibandakanya njani - konke ngaphambi kokuba intengiso kunye nomsebenzi wentengiso ungaqali.
Itekhnoloji entsha, ebethelelwe kwizisombululo ezinje nge IMicrosoft Dynamics 365 kwaye Intengiso yeCRM, Inika amandla okubonisa indlela yokuziphatha kwabaxumi ngeyure ngokusebenzisa iinkqubo ezisebenziseka lula ezizenzekelayo kwaye azifuni zenzululwazi zedatha. Yenza uvavanyo olulula lweziphumo ezininzi kunye nolwazi lwangaphambili olukhokelayo kunokwenzeka ukuba lithenge imveliso yenkampani, ubhalise kwincwadana yenkampani, okanye uguqulele umthengi ngezinye iindlela, kunye nokuba zeziphi izikhokelo ezingaze zithenge, akunamsebenzi. iswekile kangakanani le nto.
Olu lwazi lokuziphatha olunzulu luxhobisa abathengisi ukuba basebenzise amava abathengi ngokusebenzisa amandla eemodeli ezisekwe kumatshini, kunye neenkcukacha zeshishini kunye nedatha yabathengi ukuze babe nemodeli eyomeleleyo, yokuqonda kunye nokuqikelela. Amanqanaba okuguqula anokunyuka ngama-250-350 eepesenti, kunye nexabiso leyunithi nganye yokulinganisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50.
Ukuqikelela, ukuthengisa kwangaphambili kunceda ishishini ukuba lingafumani kuphela Kaninzi abathengi kodwa bhetele abathengi.
Olu hlalutyo olunzulu lukhokelela ekuqondeni okukhulu kweshishini okanye amathuba abantu okuthenga okanye okuzibandakanya, ngelixa ikwabonelela abathengisi ngokufikelela kubukrelekrele obunokwenzeka obunokuthi uxele kwangaphambili isimilo esizayo. Ukuba amaqela athengisayo kunye nentengiso anokufumana ukuqonda kubathengi babo ngoku kunye nokuziphatha okunokwenzeka kwixesha elizayo, kunokwenzeka ukuba babonise iinkonzo kunye neemveliso ezinokubhenela kubo. Kwaye oko kuthetha ukuthengisa okusebenzayo ngakumbi kunye nentengiso, kwaye ekugqibeleni abathengi abaninzi. UChris Matty, uCEO nomsunguli we IVersium
Ukuxela kwangaphambili kubahlalutyi yenza ukuthengisa kunye namaqela entengiso ukuba akhuphe ulwazi olubalulekileyo kubathengi bembali kunye nedatha yeCRM ukuyila iimodeli zokuxelwa kwangaphambili.
Ngokwesiko, uLawulo lobuDlelwane loMthengi (i-CRM) ibiyinto nje engenamsebenzi, lovukelo ukuhamba komsebenzi. Ngeendlela ezizezinye zokuchitha imali kunye nexesha nokuba kukwizazinzulu zedatha okanye kwi-hunch, ukusebenza ngendlela efanelekileyo yeyona ndlela inobungozi. Ukuqikelela kubahlalutyi Iinzame zokuguqula ukuthengisa kunye nentengiso yeCRM ngokunciphisa umngcipheko kunye nokuvumela iqela lezentengiso ukuba liqhubele phambili ukuthengisa okrelekrele kunye namaphulo okuthengisa.
Ngaphezulu, ukuqikelela kubahlalutyi yenza ukuveliswa kwamanqaku akhokelayo kwangaphambili kuzo zombini i-B2C kunye ne-B2B yeentengiso ezenza ukuba ukuthengisa kunye namaqela okuthengisa ukuba abe li-laser egxile kunene abathengi kanye ngexesha elifanelekileyo, ebalathisa kwiimveliso ezifanelekileyo kunye neenkonzo ezilungileyo. Ezi ntlobo ze kubahlalutyi vumela abasebenzisi ukuba bavelise kwaye bongeze uluhlu olutsha, oluguqulweyo oluphezulu lokujonga ngokusekwe kwiprofayili yomthengi esele ikho ngokubeka iseti yedatha ephetheyo okanye indawo yokugcina idatha.
Ezinye zeemeko zokusebenzisa ezixhaphakileyo zedatha enkulu kubahlalutyi ujolise ekuphenduleni umbuzo, Nguwuphi umthengi onokuthenga? Ayothusi into yokuba le inyathelwe kakuhle yi-BI kwaye kubahlalutyi izixhobo, ngoososayensi beenkcukacha abaphuhlisa ii-algorithms zesiko kwiiseti zedatha yangaphakathi, kwaye kutsha nje, ngamafu wentengiso anikezelwa ngababoneleli abanjengoAdobe, IBM, Oracle, kunye neNtengiso. Kunyaka ophelileyo, umdlali omtsha uvele ngesixhobo sokuzisebenzela, esithi, phantsi kwezikhuselo, sisebenzise ukufunda ngomatshini, sixhaswe siseti yedatha ephetheyo eneempawu ezingaphezu kwesigidi esinye sezigidi. Inkampani yiVersium. UTony Baer, ​​uMhlalutyi oyiNtloko e I-Ovum
Ukuxela kwangaphambili kubahlalutyi ekuziphatheni kwabathengi yintsimi enabantu abaninzi, utshilo uBaer. Nangona kunjalo, isekwe ekuqondeni ukuba idatha ikumkani, unikezela ukuba izisombululo ezinje ngeVersium's zezinye ezinyanzelekileyo kuba zibonelela ngokufikelela kugcino olukhulu lomthengi kunye nedatha yeshishini ngeqonga elibandakanya ukufunda komatshini ukunceda abathengisi ukuba baqikelele indlela yokuziphatha kwabathengi.
IVersium ihambisa uqikelelo oluzenzekelayo kubahlalutyi izisombululo, ezibonelela ngolwazi olusebenzayo lwedatha ngokukhawuleza, ngokuchanekileyo nangokweqhezu leendleko zokuqesha amaqela enzululwazi edatha okanye imibutho yeenkonzo zobungcali.
Izisombululo zeVersium ziphakamisa indawo yokugcina izinto ezininzi zenkampani iLifeData®, equlathe ngaphezu kwe-1 trillion yabathengi kunye neempawu zedatha yeshishini. I-LifeData® iqulethe idatha yokuziphatha ekwi-intanethi nangaphandle kweintanethi kubandakanya iinkcukacha zomfanekiso wentlalontle, idatha yexesha elisisiseko, umdla wokuthenga, ulwazi lwezemali, imisebenzi kunye nezakhono, amanani abantu kunye nokunye. Ezi mpawu zihambelana nedatha yangaphakathi yeshishini, kwaye isetyenziswe kwiimodeli zokufunda ngomatshini ukuphucula ukufunyanwa kwabathengi, ukugcinwa kunye nokuthengiswa okuthe kratya kunye nemisebenzi yokuthengisa.
Funda ngakumbi malunga nokuqikelelwa kweVersium
tags: ulawulo oludibene nabathengiImicrosoft dynamics 365iqandaUhlalutyo oluqikelelweyoicandelo labathengisiversium